सच्चा नेपाली हो भने एकचोटी दिल खोलेर पढ्नुहोस , रबि लामिछाने अब प्रधान्म.......... - info4nepal
सच्चा नेपाली हो भने एकचोटी दिल खोलेर पढ्नुहोस , रबि लामिछाने अब प्रधान्म……….
आज भोलि सबैले रवि लामिछानेलाइ देशको एक पत्रकार मात्र नबनाइ अब प्रधानमन्त्री नै बनाउन पर्ने धारणा राखेका छन । उनलाइ जेल हाल्न प्रयास गरिदा देश भरिका जनता उनको साथमा थिए । आखिर किन त ?
जनताको साथ र जनतालाइ माया गर्ने मान्छे मात्र एक असल प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । केपि ओलिले जनतालाइ के माया गरेका छन र?? जति रविले गर्छन । केपि ओलिले जनताको के साथ दिएका छन र जति रविले दिएका छन । जनताको पिर मर्का लाई सहज पार्ने मात्र नभएर, भ्रष्टाचार , चोरी , डकैतिलाइ पनि निर्मुल पार्ने रवि वास्तविक हिरो हुन । उनलाइ प्रधान्मन्त्री बनाउन पहल गरौ । सबैले शेयर गरेर हरेक जनता माझ पुर्याउ ।
देशका होनहार पत्रकार रवि लामिछाने लाई जेल हाल्ने षडयन्त्र भैरहेको कुरा त सबैलाइ अबगत नै छ । तर होसियार, जस्ले यो षडयन्त्र रचेको हो तेसलाइ नेपाल आमा र नेपाली जनताले कहिले पनि माफी दिने छैनन । रवि देशको सपूत हुन ।
कति दुख परेका लाई रविले साथ दिएका छन । कानुनले कारबाही नगरेका अपराधिलाइ रविले कारबाही हुने बाताबरण मिलाएका छन । बल्ल बलत्कारिहरी डराउन थाले , कतै रविले था पाएर कारबाही होला कि भनेर । ठगी , लुटपात, कालोबजारी गर्नेहरुले एकपटक सोच्ने गर्दछन कि , कतै रविले त थाहा पाउदैन भनेर।
सबै चोर फटाहा हरु रवि भनेपछी कर्तुन नगर्न तर्फ हिडेका छन । येस्तो महान पत्रकारलाइ जेल हाल्ने भनेर रचित गरिएको षडयन्त्र कतिसम्म ठिक हो?
हिजोका दिनमा हत्यारा भनेर घोसणा गरिएको बालकृष्ण ढुङ्गेललाइ आम माफी भनेर रिहा दिन मिल्ने गणतन्त्रमा , रवि लामिछाने जस्ता असल पत्रकारलाइ जेल हालियो भने , के नेपाली जनता हेरेर बस्लान त? के सधै भेडा बनेर बस्लान त नेपाली जनता?
कानुन पनि कति कमजोर हुँदै गएको हो? ? बलत्कारी , हत्यारा लाई आम माफी दिने , तर देशप्रेमी पत्रकारलाउ जेल हाल्ने षडयन्त्र रच्नेलाइ केहि गर्न नसक्ने ।
ओलि सरकार साच्चै लाचार रहेछ । नामर्द सरकार रहेछ । पहिला पहिला , न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्थे तर आजभोली न्याय नपाए रवि लामिछाने कहाँ जानू भनिन्छ । किनकी उनी सधै सत्य र न्यायको पक्ष लिएर सत्यको जीत गराउन पहल गर्दछन ।
येस्तो असल पत्रकारलाइ जेल हालियो भने चोक चोक बाट अवाज आउनेछन । देशभरी बिरोध हुनेछ । जताततै जे पनि अराजकता मच्चिन सक्छ । किनकी सधै नेपाली जनता भेडा हुदैनन । रबि लामिछाने नेपालि थिय , नेपाली हुन र नेपाली नै रहनेछन ।
होला केही कारण बस दुई चार बर्स उनी आप्रबासी हुन पुगे होलान तर यो पनि ख्याल राखौ कि , आज भन्दा 20 बर्स अगाडि देखि नेपाली पत्रकारितामा लागेका रवि लामिछामे लरोतरो व्यक्ती होइनन । देशको गहना हुन । हाम्रो गहनालाई हामिले जोगाइ राख्न पर्दछ नत्र हामी हुनुको अस्तित्व रहदैन ।
तपाइलाइ कस्तो लागेको छ यो कुरा? के रविलाइ जेल हाल्नु उचित होला त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
साथै रवि लामिछानेको साथ दिन यो पोस्ट सक्दो शेयर गरि धेरै भन्दा धेरै जनमानिसमाझ पुर्याउ र सक्दो दबाव दिउ । रवि लामिछानेको जय होस । जय नेपाल , जय नेपाल
के छ कांग्रेसले तयार पारेकाे अार्थिक नीतिमा? (पुर्णपाठ सहित)
१५ लाख भोट बढाउने संकल्प गरौं–कांग्रेसका ७ युवा नेता (प्रस्तावको सारांस)
Breaking : देउवाद्वारा गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलको राजीनामा माग